Esi Free iPhone égwu Ọbụna Ha na-akwụ ụgwọ égwu
Esi ngwa ọdịnala na iPhone maka Free
Ọ dị onye na-adịghị n'anya free? E nwere ọ bụghị dị ka otu onye ọrụ na dum iOS obodo onye na-adịghị achọ inwe free ngwa ebudatara ha mobile. Site free ngwa zuru version na ọrụ na a pụtara. Iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi nsonaazụ kacha mma na nke a nke a nkuzi e mepụtara.
Part1: App Store arụmọrụ zuru oke
Part2: Ina ugwo ngwa site Time-ịgba free ahịa
Part3: Sinụ ngwa ọdịnala na-akọrọ ndị ọzọ site na TunesGo Ochie
Part4: Sinụ free APP nkesa software
Part5: Ịchọ na weebụsaịtị
Part1: App Store arụmọrụ zuru oke (apụ free ngwa, na-eme nchọgharị edemede na App ụlọ ahịa nchọgharị)
Ọ bụ nnọọ nkịtị na e atụle site ọnụ ọgụgụ nke ndị ọrụ karịrị dị iche iche forums. Ma, n'ihi na a ọhụrụ ọrụ nke a pụrụ ghọọ ihe iseokwu n'ihi na eziokwu na iOS adịghị mfe iji rụọ ọrụ maka a ọhụrụ ọrụ. Na-esonụ bụ usoro na nke a nke na-ekpuchi niile ihe:
m. Onye ọrụ nwere enweta na ngwa ahịa ngwa n'ime ngwa drawer nke iPhone:
ii. Wet ke niile chọrọ Ama na pịa OK:
III. Na-agagharị na ngwa n'ime edemede:
too ogologo. The ngwa a ga-tapped iji nweta nkọwa nke mere na ihe nhọrọ nwere ike-enyoba:
v. Press "Sinụ" n'ihu n'ihu na nke a:
vi. Pịa wụnye ịrụcha usoro na ibudata na ngwa ma nke ga-arụnyere na-akpaghị aka site iOS:
Part 2. ụgwọ ngwa site Time-ịgba free ahịa
Site oge ịgba free ahịa pụtara na a na-akwụ ụgwọ ngwa bụ maka a mmachi oge iji jide n'aka na ihe ọrụ nwere ike inwe uru na ibudata ngwa nke mere na Fim nwere ike mma karịrị oge. Na-esonụ bụ usoro na nke a:
m. Cheta-lfy bụ ngwa na bụ free n'ihi na a obere oge. Ọ bụ ezie na nkịtị price nke ngwa bụghị elu ka ọ na-eme a nnukwu ọdịiche. The interface bụ dị ka ndị a:
ii. Ibudata ngwa njirimara kwesịrị ileta http://bgr.com/2015/05/26/best-free-iphone-apps-ipad-may-26/ na pịa download njikọ:
III. Nke a ga-eduga onye ọrụ na-App ụlọ ahịa na ebe o kwesịrị ime n'aka na "Download free" button na-enwe:
too ogologo. The kpaliri-na-egosipụta maka ngwa download ga-agbasoriri iji jide n'aka na echichi na-dechara na ngwa bụ njikere ịrụ ọrụ. Nke a na-okokụre usoro na zuru na ugbu a onye ọrụ nwere ike na-enwe a ụgwọ ngwa na e ebudatara ka a N'ihi nke obere oge free enye. Ọ bụghị naanị na Rịba ama-lfy ma e nwere ọtụtụ iri puku ngwa ọdịnala na dị site mmachi oge free enye.
Part 3. Get ngwa ọdịnala na-akọrọ ndị ọzọ site na TunesGo Ochie
Ọ bụkwa otu n'ime ndị dị mfe software omume na ike ga-eji na-eme needful na nke a na onye ọrụ dị nnọọ mkpa ijide n'aka na na software omume na-ibudatara na arụnyere. The nzọụkwụ na-kpọrọ aha n'okpuru
Ọzọ dị ike na-akpali akpali ngwá ọrụ na e mepụtara site Wondershare site na aha TunesGo Ochie na-eme ka o kwe omume maka ọrụ iji na-enweta ngwa ọdịnala na-na-akọrọ ndị ọzọ na a ngwa ngwa na irè n'ụzọ. Usoro na-agbakwunyere n'ime bụ pụtara dị mfe na maka otu ihe ahụ ndị ọrụ na-adịghị na-eche ihu ọ bụla hassle na nke a. -Esonụ bụ ịmata nzọụkwụ aka na nke a:
m. Onye ọrụ kwesịrị ka ibudata ndutịm http://www.wondershare.com/ios-manager/ na kwesịrị Soro kpaliri iji jide n'aka na echichi na-mere:
ii. Na nzọụkwụ ọzọ onye ọrụ kwesịrị ka jide n'aka na iDevice jikọọ na kọmputa na eriri USB:
III. The software ga-akpaghị aka ịchọpụta ngwaọrụ onwe ya na ga-egosipụta ọdịnaya nke mere na ha nwere ike na-mma:
too ogologo. Onye ọrụ ahụ kwesịrị ijide n'aka na Mbupụ na bọtịnụ na n'elu na-enwe mere na dobe ala menu egosi. Site n'ebe onye ọrụ kwesịrị ka họrọ ihe kwesịrị ekwesị na ngwaọrụ nke nyefe a chọrọ. Ozugbo mere ọ ga-rụchaa usoro na-akpaghị aka:
Part 4. Get free APP nkesa software
The free nkesa software omume jide n'aka na iOS ngwa na-ebudatara ma wụnye enweghị ihe ọ bụla nsogbu na nke. Ọ bụ-ahụ kwuru na free nkwalite nke ngwa nwere ike ghara ịbụ ka dị irè ka ụgwọ ndị ma ma ọ bụ ngwá ọrụ dị ike iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi ngwa ka web ndekọ enweghị ihe ọ bụla nke. Ọ na-na--ahụ kwuru na free software omume na-kwụrụ ndebanye aha site na nke a rigorous atụmatụ nwere ike mepụtara na nke a. Na-esonụ bụ ụfọdụ n'ime isi mmalite na nke a:
m. www.snapchat.com bụ otu nke kasị mma nyiwe na-eme ka n'aka na ngwa na-ekesa for free site a Micro website. Esonụ na a na foto nke website:
ii. https://path.com/ bụ ihe ọzọ na free ma dị ike ngwá ọrụ iji jide n'aka na iOS ngwa na-akọrọ ndị ụwa n'efu:
III. http://appadvice.com/reviews bụ ihe ọzọ na free ngwá ọrụ na-enye ohere onye ọrụ iji jide n'aka na ngwa na-ulo-ikwū-ka nwere website na iOS mmepe ike iji nke a n'elu ikpo okwu iji jide n'aka na ngwa na-akwalite n'èzí Apple si ngwa ahịa:
Part 5. Searching na weebụsaịtị
The website search na analysis bụkwa otu n'ime ndị kasị mma isi na-agagharị maka iOS ngwa na dị mkpa ka onye na-nakwa dị ka azụmahịa ọ na-agba ọsọ. Ụfọdụ iOS ọrụ ndị nke echiche bụ na search results-na-egosipụta site App ụlọ ahịa ndị jupụtara njehie na ọ bụ n'ihi eziokwu ahụ bụ na njuaka ngwa na-ẹmende na egosipụta na mgbe ụfọdụ ọrụ kwesịrị na ngwa nke na-adịghị depụtara na na mbụ search results ma ọ bụ họọrọ ke n'elu. Iji zere niile a stof e nwere weebụsaịtị nke na-anakọta ozi banyere pụrụ iche ngwa na-ọkọnọ site App ụlọ ahịa na-ya ọrụ ha na-mkpa ka ọtụtụ n'ime ha ma ka leghaara n'ihi na eziokwu na ha na-mgbe e depụtara ke n'elu. The weebụsaịtị ka AppShopper na AppLISTS jide n'aka na ndị nile dị otú anatara na-egosipụta ka ọrụ nke mere na ha nwere ike inwe zuru uru na nwere ike ibudata ngwa ozugbo na iTunes software na e arụnyere na ka usoro. Nke a iTunes ngwa a na-ahụ synced na lekwasịrị ngwaọrụ na data na-agafere nke na-azọpụta a otutu oge maka ọrụ.
10 Best ngwa ọdịnala n'ihi Lyrics
Top 10 Ngwa Motion Android na iOS égwu
Nyefee ngwa site Android ka Moto X na 1 Pịa
Video Chat ngwa Nyere iru gị Facebook enyi na android na iOS ekwentị mkpanaaka na
A Comprehensive na ọtụtụ ndepụta nke égwu Mere maka Google si Chromecast
Video Player égwu (iOS & Android)
Olee otú Download Flappy Nnụnụ maka iOS na Android na kemgbe wetara
Otú nyefee ngwa site Samsung Galaxy S2 ka S4
Olee otú Wụnye ngwa ọdịnala na Nexus 7 si PC
Olee otú Download Vevo ka Apple TV
> Resource> égwu> Esi ngwa ọdịnala na iPhone maka Free